राजा काँग नगद
तपाईं चलचित्र र काल्पनिक श्रृंखला मा राजा हांगकांग को scariest र क्रोधित संस्करण देखेका हुन सक्छ. तर के ठूलो र शक्तिशाली कोंग बाहिर जान्छ भने साँच्चै हास्यास्पद हुन र आफ्नो सचेत मनपर्छ गर्न? खैर, कि ठ्याक्कै के हो राजा काँग नगद तपाईं को लागि दोकान मा छ. यी नयाँ स्लट बोनस अनलाइन खेल एक सुन्दर कार्टून शैली जंगल को पृष्ठभूमि मा सेट गरिएको छ. जहाँ राजा काँग उनको टाउको मा मुकुट संग बस्छन तपाईं एक पत्थर कुर्सी वा बरु एक सिंहासन नोटिस गर्न सक्नुहुन्छ. उहाँले जंगल को राजा जस्तै poses तर वास्तवमा यो खेल मा एक हास्यास्पद मान्छे छ. केही साँच्चै सुन्दर एनिमेसन र बोनस सुविधाहरू, तपाईं यो खेल प्रेम पर्नु निश्चित हो. खेल्नु, तपाईं £ 0.10 गर्न £ 500 हरेक स्पिन देखि कहीं पनि आफ्नो सट्टेबाजी रकम रोज्नुपर्छ.
राजा काँग नगद विकासकर्ता बारेमा
यो नेत्रहीन तेजस्वी नयाँ स्लट बोनस अनलाइन खेल निलो छापा विकास भएको थियो. एक अनलाइन क्यासिनो लागि दुनिया मा शीर्ष विकासकर्ताहरू को. तिनीहरूले खेल को एक विभिन्न वर्ग मान्छे केही वास्तविक monies बनाउन मदत गरेको छ कि सिर्जना अनुभव को एक दशक भन्दा बढी छ.
एक सिंहावलोकन देखि, खेल धनी ग्राफिक्स र उच्च गुणस्तरीय अडियो-भिडियो इन्टरफेस संग आश्चर्यजनक देखिन्छ. खेलको प्रतीक धेरै रंगीन र विजेता मा एनिमेसन प्रस्ताव. तिनीहरूले खेल लोगो छन्, सुगा, बाघ, गैंडा र गोही. लोगो रील यसको प्रकारको अवतरण पाँच मा 500x को शीर्ष भुक्तानी प्रदान गर्दछ. यो तल्लो मूल्य प्रतीक नयाँ स्लट बोनस अनलाइन खेल एक गर्न जे कार्डहरू खेलिरहेका छन्. त्यहाँ खेल दुई बोनस प्रतीक हुन् र तिनीहरूले राजा कोंग र काठ बैरल प्रतिनिधित्व गर्दै.
जंगली प्रतीक: को बैरल यो जंगली प्रतीक हो नयाँ स्लट बोनस अनलाइन खेल र यो सबै राजा कोंग बाहेक लागि कवर. सबै पाँच रील प्रदर्शित हुनेछ र यसको अवतरण पाँच पनि तपाईं आफ्नो खम्बामा 500x दिन्छ.
राजा काँग स्क्याटर: राजा कोंग प्रतीक हो खेल र तीन वा बढी को स्क्याटर सुविधा बोनस सुविधाहरू अनलक. त्यहाँ चार फरक बोनस सुविधाहरू छन् र तपाईं अंधाधुंध तिनीहरूलाई कुनै पनि एक सम्मानित छन्. तिनीहरूले मुक्त spins समावेश, multipliers र विभिन्न Jackpot जीत. बोनस स्तरमा, तपाईं पनि तपाईं प्रयोग गर्न सक्छौं कि एक जुवा खेल्नु सुविधा प्रस्ताव गर्दै.
यो सबैभन्दा मनोरंजक को छ नयाँ स्लट बोनस अनलाइन आश्चर्यजनक ग्राफिक्स र ध्वनि संग. त्यहाँ बोनस सुविधाहरू एक भीड तपाईं केही भाग्यमानी spins केही सुन्दर पुरस्कार बनाउन मद्दत गर्ने छ.